नेपाल आज | हुन्डाईका बिक्रेताको नाटकः एउटै गाडीमा २६ लाख नाफा राख्ने अनि शुन्य प्रतिशत ब्याजको हल्ला फैल्याउने
हुन्डाईका बिक्रेताको नाटकः एउटै गाडीमा २६ लाख नाफा राख्ने अनि शुन्य प्रतिशत ब्याजको हल्ला फैल्याउने
चैत १८ । तपाईंले ‘चिनी खुवाएर मह छदाएको’ भन्ने कुरा कतै सुन्नु भएको छ ? यो वाक्यको अर्थ हुन्छ, चानचुन दिएर महंगो असुल्ने । ठीक अहिले हुन्डाई गाडीको विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले यस्तै योजना ल्याएको छ । एउटै गाडीबाट २६ लाखसम्म नाफा कुम्ल्याउने लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले गाडी किन्नेलाई शुन्य ब्याजदरमा फाइनान्सिङ सुविधा दिने भएको छ ।
हुन्डाइको टक्सन जिएलएस हाई ट्रिम भन्ने डिजेल ब्रान्डको भन्सार छुटाइसकेको मूल्य छ ७६ लाख ५० हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ ५० पैसा । तर यो गाडीको बजार मूल्य लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले कति राखेको छ ? अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ ? ब्याजबिना नै ऋणको सुविधा कसरी मिल्यो होला भन्ने प्रश्नको जवाफ यसैमा छ । लक्ष्मीले टक्सन जिएलएस हाई ट्रिम ब्रान्डको एक गाडी बेच्दा २६ लाख ४५ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ नाफा लिन्छ । अर्थात यसको बजार मूल्य छ १ करोड २९ लाख ६ हजार ।
यो त एक उदाहरण मात्रै हो । लक्ष्मीले कम्तिमा २० वटा ब्रान्डका कार जीप बिक्री गर्छ । यी सबैजसोमा उच्चतम् नाफा राख्छ । यदि यसलाई कानुनको कसीमा जाँच्ने हो भने यसलाई अपराध मान्नु पर्ने हुन्छ । किनभने नेपालको कानुनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न पाइन्न् । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले कानुन देखाउने निकायको मुखमा बुझो लगाइदिएर यस्तो लुट मच्चाउको शंका गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौंको नक्सालमा कार्यालय खोलेर व्यापार गरिरहेको यो संस्थाले ग्रान्ड माज्ना ब्रान्डको कारमा पनि १० लाख नाफा राखेको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले १६ लाख ६९ हजारमा करसहित आयात गरेर २६ लाख ५६ हजारमा बिक्री गर्छ । अब आफै बिचार गर्नुहोस् एउटा कारमा तपाईले बिक्रेतालाई कति लाख नाफा बुझाइरहनु भएको रहेछ ?
[caption id="attachment_63171" align="aligncenter" width="750"] हुन्डाइका गाडी कुनमा कति लुटिन्छ नाफा ? हेर्नुहोस विवरण[/caption]
लक्ष्मीले बिक्री गर्ने हरेक मोटर कारमा मुलुकमा विद्यमान ऐन कानुनले तोकेभन्दा बढी फाइदा लिइरहेको छ ।
आखिर यस्तो किन ? लक्ष्मीका सिनियर मार्के्टिङ मेनेजर (ब्रान्ड) अवाशिष ओझालाई हामीले प्रश्न गरेका थियौं । तर मार्के्टिङ मेनेजरको पदमा रहेका भए पनि उनको जवाफमा निरिहता मात्रै प्रकट भयो । उनले एउटै कारबाट १०–१० लाख नाफा राख्नु पछाडिको कारणमा ढुवानी, भन्सार, गोदाम आदि खर्च हो भनिदिए । जबकी हामीले प्रस्तुत गरेको कारको मूल्य भन्सारको २४० प्रतिशत कर जोडिसकेपछिको हो ।
मेनेजर ओझाले नाफाबारे कुनै टिप्पणी नगरेर आफ्नो निरिहता प्रकट गरे । किन र कसरी नियमविपरीत नाफा राखिएको छैन भन्ने विषयमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेटल जवाफ दिइरहन आवश्यक ठान्दैन । लक्ष्मीका मालिक निराकर श्रेष्ठ त टेलिफोन सम्पर्कमा पनि आउन चाहँदैनन् । किनभने यो प्रश्नको जवाफ दिनु भनेको उपभोक्ता हित प्रति जिम्मेवार हुनु हो । यो कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न खोज्यो भने उसकै कट्टु फुस्किने डर छ । यसकारण पनि लक्ष्मीले यो लुटको सत्यता बाहिर ल्याउने मुख्र्याईं गर्दैन ।
हुन्डाइ कार बेच्नेहरु भन्छन्, –तपाईहरु लेखिरहनुस्